Ugu yaran 200 qof oo Maraykan ah oo ku Islaamay Masjid Dacwah ee St. Paul – Xeernews24
Ugu yaran 200 qof oo Maraykan ah oo ku Islaamay Masjid Dacwah ee St. Paul
9. März 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Waxaa mahad leh inuu Ilaahey noo dhameystiray muddo 10 sano oo la waday howlaha dacwada Islaamka ama faafinta diinta Islaamka lagu faafinayo waddanka Maraykanka gaar ahaan gobolka Minnesota. Waxaad moodaa inuu Ilaahey qadarkiisa ka mid aheyd inaan u soo qaxno waddanka Maraykanka si aan diintiisa u faafino. Ilaahey howshaasi noo fududeeyey ayaa mar weliba Mahadaasi leh. Nabiga KK wuxuu yiray isagoo la hadlayo Sayid Cali:
” فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم» (رواه البخاري”
(Micnaha) ” Ilaahaan ku dhaartay in adduunyo oo dhan oo lagu siiyo oo gacanta laguu geliyo waxaa ka wanaagsan in uu hal qof uu gacantaada uu ku soo Islaamo”. Alxamdullilah waxaa Masjid Dacwah ama Minnesota Dawah Institute ( Machadka Dacwada Islaamka ee Minnesota) ku soo Islaamay 200 qofood muddo aad u kooban. Taasi waa qeyb ka mid ah howlaha masjidka ee Ilaahey hanaga aqbalo (Aamiin).
Masjidka wuxuu ahaa kii ugu horeeyey ee ay Muslimiinta gobolka Minnesota ay ka gadaan caasimadda gobolka ee St. Paul loo yaqaan. Masjidkaasi ama Markazkaasi waxaa la aasaasy dhamaadkii bishii February ee sanadkii 2007. Waxaa diinta Islaamka ku barta si ay u noqdoaan ducaat ( faafiyayaasha diinta Islaamka) ilaa 300 arday oo isugu jiro caruur, dhalinyaro, waalidiin oo qaarkood 70 jiro ah, iyo dad badan oo hadda soo Islaamay oo u ku jiray David oo 13 jir qiso cajiib leh oo aan hoos ku sheegi doono.
Masjidka barashada diinta ka sakow wuxuu fuliyaa adeegya bulshadeed oo aad u badan oo ka mid ah mashruuca badbaadinta dhalinta khadka saxda ka dhacay, booqashada xabsiyada, xalinta khilaafaadka qoyska, guurka iyo sharciyeyntiisa, iyo dajinta dadka cusub iwm.
Dadkii soo Islaamay waxaa ka mid ah wiil 13 jir ah oo aabihiisa noo fasaxay inuu soo Islaamo. Waxay sheekada u dhacday sidan:
Aabihiisa wuxuu na waydiiyey: ” waxaan maqlay haddii wiilkeyga uu soo Islaamo inuu noqonayo sida Ibraahim oo ahaa arday Masjid Dacwah oo Soomaali ah oo saaxiib la ahaa David”.
Waxaan ku dhahay maxaad ula jeedaa Ibraahim oo kale?
Aabaha David wuxuu yiray: ” Hadduu soo Islaamo David ma joojin doonaa zinada oo gabdhaha uu la socdo, heesaha ama music dhageysiga, sigaarka iyo daroogada uu isticmaalo, iyo xatooyada”.
Waxaan u sheegay hadduu David u soo Islaamo inay diinta Islaamka ay intaasi ka reebi doonto.
Markaasi ayuu aabihii David isagoo gaal ah igu dhahay: ” Fadlan (Please) ii Islaamiya David yare si uu noqdo saaxiibkii Ibrahim oo kale oo aan zineysan, sigaar iyo daroogo cabin, music aan dhaqeysan”. Muddo 2 usbuuc ka dib David wuu isbedelay oo uu ku taxnay casharadayda wuxuu joojiyey xumaan oo dhan wuxuu noqday Ibraahim oo kale.
Usbuucii 3aad ayaa galabtii marka uu aabihii David ka soo laabtay shaqadii ayaa wuxuu guriga ku arkay wax yaab badan. Aabaha waxaa caado u aheyd marka uu shaqada ka soo laabto inuu aado qaboojiyaha si uu cabo dhow khamri oo ah khamrada biirta (BEER) loo yaqaan.
Laakiin waxaa uu qaboojiyihii uu ka waayey wixii khamri ahaa oo dhan. Wuxuu ku arkay caano iyo liinta casiirka ah oo kaliya. Ka dib wuxuu u yeeray wiilkiisa oo kor joogay uu ku yiray soo dego su’aal ayaan kuu qabaa. David ayaad hoos u soo degtay.
Aabihii David wuxuu yiray: ” Davidow aaway khamradeydii halkan ka buuxday?”.
David wuxuu yiray: ” Aabow ma xusuusataa markaa 3 usbuuc ka hor aad ii fasaxday inaan Islaamo. Maalintaasi ka dib Islaamkii aan akhriyey ayaa waxaan ka helay inay xaaraamta ku koobneyn oo kaliya zinada, music, sigaarka iyo daroogada balse ay khamradana ku jirtay.
Goortaasi ayuu aabihii David oo carooday yiray: ” David ma xusuusataa waxaan Imaam Xasan Jaamici ku dhahay David ii Islaami laakiin anniga kuma jirin
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/islam.jpeg 660 1240 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-09 08:51:362017-03-09 08:51:36Ugu yaran 200 qof oo Maraykan ah oo ku Islaamay Masjid Dacwah ee St. Paul
Daawasho Haboon Heeladi Heelo yar-yar ama Bogcad oo Djibouti,Sitti iyo Salal... Fadeexad: Wasiirka Madaxtooyadda Oo Qarxiyay Sir Qarsoonayd, Sheegayna In Heshiisyada...